ibis Paint X 5.6.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.6.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား အနုပညာ & ဒီဇိုင္း ibis Paint X
ibis Paint X ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ခရုစုတ် 142 စုတ်တံ, 37 filter များ, 46 screentones, 27 Blend Mode, ပုံဆွဲဖြစ်စဉ်များကိုမှတ်တမ်းတင်, လေဖြတ်ထောက်ပံ့ပေးသော, X ကို 700 ဖောင့်ကျော်, 2100 ပစ္စည်းများကိုကျော်တစ်ဦးစီးရီးအဖြစ်စုစုပေါင်းထက်ပို 35 သန်းကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတဲ့ပေါ်ပြူလာနဲ့စွယ်စုံပုံဆွဲ App ဖြစ်ပါတယ် Paint တည်ငြိမ်အင်္ဂါရပ်, ထိုကဲ့သို့သော radial လိုင်းသောမင်းတို့သို့မဟုတ် symmetry သောမင်းတို့အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအုပ်စိုးသောမင်းကိုအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်မျက်နှာဖုံး features တွေ clipping ။
* Youtube ကိုရုပ်သံလိုင်း
ခရုစုတ် Paint X ပေါ်မှာအတော်များများသင်ခန်းစာဗီဒီယိုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်မှအပ်လုဒ်လုပ်ထားကြပါတယ်။
* Concept ကို / အင်္ဂါရပ်များ
- desktop ပေါ်မှာပုံဆွဲ apps များ၏ထိုထက်သာလွန်တစ်ဦးက Highly အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် features တွေ။
- OpenGL နည်းပညာအားဖြင့်သဘောပေါက်ချောမွေ့နှင့်အဆင်ပြေပုံဆွဲအတွေ့အကြုံကို။
- သင်အခြားအသုံးပြုသူများ '' ပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဗီဒီယိုများထံမှနည်းစနစ် drawing ကိုသင်ယူနိုင်မည့် SNS ပါရှိပါတယ်။
အသုံးပြုသူများထံမှ * တုံ့ပြန်ချက်
- အလွယ်ဆုံးအားလုံးဆွဲ apps များအကြားသုံးစွဲဖို့,
- ငါက Mac သို့မဟုတ် PC မလိုဘဲဒီဂျစ်တယ်ရေးဆွဲရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေလေပြီတကား
ခရုစုတ် X ကိုအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်များမျှဝေ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတစ်လျှောက်ဆွဲ app ကိုမြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် Paint ။
- ချောမွေ့အထိ 60 fps နဲ့ဆွဲ။
- ကျဆင်းလာခြံအပါအဝင်စုတ်တံ၏ 142 မျိုး, ခြံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြံ, လေစုတ်တံ, ပန်ကာစုတ်တံ, ပြားချပ်ချပ်စုတ်တံ, ခဲတံ, ရေနံစုတ်တံ, မီးသွေးစုတ်တံ, Crayons နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းများအစွန်အဖျားခံစားရတယ်။
- ထိုသို့သော opacity ကိုများနှင့်ကနဦး / ဗိုလ်လုပွဲဖြီးထောင့်ကိုအဆုံးသတ် / စတင်ထူအဆုံးသတ် / စတင်. အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဖြီး parameters တွေကို။
- သင်လျင်မြန်စွာဖြီးအထူနှင့် opacity ကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းလျင်မြန်စွာခြင်းလျှော။
- တစ်ဦးချင်းထိုကဲ့သို့သောအလွှာ opacity ကို, alpha blending အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအလွှာဟုသတ်မှတ်နိုင်အလွှာ parameters တွေကို, ဖြည့်စွက်နုတ်နှင့်မြှောက်။
- clipping ပုံများ, စသည်တို့ကိုတစ်နေရာလေးကို clipping အင်္ဂါရပ်
* ခုနှစ်တွင်-app purchase
(တဦးတည်းကိုချွတ်ပေးချေမှု) "Add-on ကြော်ငြာ Remove" နှင့် "ချုပ်အသင်းဝင်" (လစဉ်ငွေပေးချေမှု): ကျနော်တို့ခရုစုတ် Paint X ကို purchasing ၏နည်းလမ်းနှစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။ သင်တစ်ဦးချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည့်အခါ, ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာလျှင်ဒီတော့က "Add-on ကြော်ငြာ Remove" ဝယ်ယူရန်ဖို့မစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျပြီးသားကို "Add-on ကြော်ငြာ Remove" ဝယ်ယူကြလျှင်, သင် "ချုပ်အသင်းဝင်" ပယ်ဖျက်လျှင်ပင်, ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားရှိနေပါဦးမည်။
ပိုကလူချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာ, ပိုမိုမြန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒါတစ်ဦးချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးချင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကချုပ်အဖွဲ့ဝင်အဓိက features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံး purchase.A ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အချိန်မှာတစ်လအခမဲ့ကြိုးစားနိုင်
- ချုပ် Fonts
- Tone Curve filter ကို
- Gradation မြေပုံ filter ကို
- တိမ် filter ကို
- ထိုအွန်လိုင်းပြခန်း မှလွဲ. ဖန်သားပြင်ထဲမှာအဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ
သင်ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့အစမ်းနဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပြီးနောက်သင်အခမဲ့အစမ်း၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မတိုင်မီသင်၏ "ချုပ်အသင်းဝင်" အနည်းဆုံး 24 နာရီမပယ်ဖျက်ကြပါလျှင် *, သင်၏ "ချုပ်အသင်းဝင်" ကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပါလိမ့်မည်နှငျ့သငျဖွစျလိမျ့မညျ အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးဘို့ပညတ်တော်မူ၏။
* ကျနော်တို့အနာဂတ်အတွက်ပရီမီယံ features တွေထပ်ထည့်မည်, ထိုသူတို့အဘို့ကိုထုတ်ကြည့်ရှုပါ။
[Add-on ကြော်ငြာ Remove]
ကြော်ငြာခရုစုတ် Paint X ပေါ်မှာပြသနေကြပါတယ်။ သင်ဤ Add-တွင် (ငွေပေးချေမှုကိုချွတ်တဦးတည်း) ကိုဝယ်လျှင်, ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာလျှင်ပင်, ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာလျှင်ဒီတော့က "Add-on ကြော်ငြာ Remove" ဝယ်ယူရန်ဖို့မစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်လိမ့်မည်။
- သင်အသုံးပြုနေတဲ့သို့မဟုတ် SonarPen သုံးစွဲဖို့သွားကြသည်သာလျှင်သောအခါ, app ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းကနေအသံ signal ကိုစုဆောင်း။ အဆိုပါကောက်ယူအချက်အလက်များကိုသာ SonarPen နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုစေခြင်းငှါစေလွှတ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်မေးခွန်းလွှာများနှင့် bug အစီရင်ခံစာများဒါခရုစုတ် Paint X ကိုထောက်ခံမှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှတုန့်ပြန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ibis Paint X အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ibis Paint X အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ibis Paint X အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ibis Paint X အား အခ်က္ျပပါ
caveso စတိုး25.13k
ibis Paint X ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ibis Paint X အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.6.1
ထုတ်လုပ်သူ ibis inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://ibispaint.com/privacy.jsp?lang=en
လက်မှတ် SHA1: 77:12:58:7A:F3:64:EB:B1:1C:82:ED:48:52:ED:82:8D:10:0E:B6:AF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Eiji Kamiya
အဖွဲ့အစည်း (O): ibis inc.
နယ်မြေ (L): Nagoya
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Aichi
ibis Paint X APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ